Ihe Mgbanwe nkezi 3.9 / 5 si 32
79th, o nwere 139K echiche
Adult, na-atọ ọchị, Drama, Manhwa, tozuru okè, Otu gbara, Ọkà mmụta, Smut, Weebụ
Mgbe piano Jaehyun na-apịzi piano, ọ bụ prọfesọ egwu egwu ụwa a ma ama, Kang Minwoo, na-akpọrọ ya n'okpuru nku ya.
Nke a gụnyere ma agụmakwụkwọ na ụlọ akwụkwọ egwu ama ama na… inwe mmekọahụ na mpụga klaasị. Jaehyun nwere olile anya na mmekọrịta pụrụ iche ya na prọfesọ ahụ ga-abịa na enyemaka, dịka ohere iji mụọ na Germany.
Ma mgbe nwa prọfesọ ahụ, ihe piano piano, nke piano, na-abanye na foto a, Jaehyun hụrụ na emebi atụmatụ ya.
Chọta nke ọhụrụ bl ọchị ma ọ bụ kesaa nke gị na yaoi.mobi, obodo webcomics kacha ukwuu na ụwa.
N'ihi na Are
N'ihe n'echiche - Webtoon Manhwa Hentai